Author Topic: Paras Shah - ex-Prince (Read 31720 times)
« on: February 14, 2015, 11:20:00 PM »
पारस बिग्रनुमा कस्को दोष ? जेल पर्दा निर्मल निवासमा खुशियाली...
« Last Edit: April 02, 2015, 09:24:27 AM by tundikhel »
Re: Who spoiled ex-Prince Paras? Gyanendra celebrates Para being jailed
« Reply #1 on: February 24, 2015, 03:36:05 PM »
« Reply #2 on: February 25, 2015, 01:42:48 PM »
Paras coming back to Nepal
« Reply #3 on: February 27, 2015, 06:24:10 AM »
यो पनि ...
ज्ञानेन्द्र कै मास्टर प्लान जस्तो पो छ त ... पारसलाई जेल हाल्नु पनि ....
« Reply #4 on: March 04, 2015, 08:45:23 PM »
There is some conspiracy going on.
Re: Who spoiled ex-Prince Paras? Gyanendra celebrates Paras being jailed
« Reply #5 on: March 08, 2015, 07:04:59 AM »
Quote from: sag on February 25, 2015, 01:42:48 PM
Any updates on when is he coming back ?
« Reply #6 on: April 02, 2015, 09:20:24 AM »
आज नेपाल फर्कँदै छन् पूर्व युवराज पारस
थाईजेलबाट रिहा भएका पूर्व युवराज पारस शाह बिहिबार नेपाल फर्कन लागेका छन् । उनी बिहीबार मध्यान्ह साँढे १२ बजे थाईएअर मार्फत स्वदेश फर्किन लागेको बुधबार अबेर रातोपाटीसँग फेबुकमार्फत सम्पर्कमा आएका निकतस्थ साथी सुनिल खड्काले जानकारी दिए ।paras shah
मातृभूमिका लागि युवा अभियान चलाउँदै आएका उनले पारसँगै आफूपनि नेपाल आउन लागेको बताउँदै पारस गत मार्च २६ का दिन जेलबाट रिहा भएको जानकारी दिए । लागू औषध कारोबारको अभियोगमा थाई प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरेको थियो ।
‘उहाँ भोलि स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ, म पनि सँगै आउँछु’, उनले भने, ‘२६ मार्चमा जेलबाट रिहा हुनुभएको हो ।’
पारसलाई अदालतले उनको लागूऔषध कारोबारको मुद्दामा सफाई दिइसकेको बताइएको छ । उनी फेरि उतै फर्किने गरी स्वदेश आउन लागेका हुन् या यतै रहनेछन् त्यसबारे भने केहि खुलाइएको छैन।
लामो समयदेखि थाइल्याण्डमा बस्दै आएका पारस नेपाल आउने बेलाबेलामा चर्चा चल्ने गरेपनि त्यो त्यो पर सर्दै गएको थियो ।
« Reply #7 on: April 02, 2015, 09:26:03 AM »
पूर्व युवराज पारस शाहले आफुलाई राजनीतिज्ञ भन्दै बयान दिएका छन् । चार बर्षअघि कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका बंगाली ज्वाईँ रुबेल चौधरीमाथि गोली प्रहार गरेको घटनामा पारसले आफ्नो पेशा राजनीति भएको बताएका हुन ।
चितवनका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पारसले दिएको लिखित बयानको प्रति नयाँपेजले फेला पारेको छ । बयानमा उनले आफ्नो परिवारमा ७ सदस्य मात्रै भएको बताएका छन् । जबकि उनको परिवारमा श्रीमति हिमानी, तीन छोराछोरी(कृतिका, पूर्णिका र हृदयेन्द्र), बाबुआमा(पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल) र हजुरआमा रत्न राज्यलक्ष्मी गरि ८ सदस्य छन् । हजुरआमा रत्नलाई उनले आफ्नो परिवारको सदस्यमा गणना नै गरेका छैनन् ।
पूर्व युवराज पारसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख समक्ष दिएको लिखित बयान
आपराधिक र विवादास्पद् गतिविधिका कारण पूर्व युवराज पारस प्रायः चर्चामा आइरहन्थे । पछिल्लो समय बैंककमा रहेका उनी त्यहाँ पनि लागु औषधसहित पक्राउ परे । र, अहिले जेलमा छन् । दरबारको सदस्य भएकै कारण उनले आफुलाई राजनीतिज्ञ भनेको अनुमान गरिएको छ ।
यसरी भएको थियो पारस–रुबेल झगडा
जेठी पूर्णिकाको जन्म दिन मनाउन पूर्व युवराज पारस परिवारसहित २२ मंसिर २०६७ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको होटल टाइगर टप्स पुगेका थिए । छोरीको जन्मदिन मंसिर २५ मा थियो । पारसले मंसिर २६ गतेसम्मको लागि होटल बुक गरेका थिए ।
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाईँ बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी २५ मंसिरको दिउ“सो साढे चार बजेतिर श्रीमति र साथीहरुसहित टाइगर टप्समा पुगेका थिए । तीन दिनदेखि त्यहीँ बसिरहेका पारससित उनको त्यही दिन साँझ चिनजान भयो । त्यसअघि उनीहरुबीच चिनजान समेत थिएन् ।
बाघको शिकार गर्न नमानेपछि फायरिङ
२५ मंसिरकै राती साढे सात बजे रुबेलका परिवार होटलको गोलघरमा बसेर खाना खाइरहेका बेला पूर्व युवराज पारस हातमा एक बोतल ब्ल्याक लेबल ह्वीस्की लिएर आए । पारसस“ग उनका ज्वाईं राजिव शाही पनि थिए । चितवनको भरतपुर नगरपालिका–१ घर भएका फडिन्द्र भण्डारी र अभयबहादुर शाह पनि त्यही“ थिए । पारसका ज्वाईं राजीवले पारस र रुबेलबीच चिनजान गराइदिए ।
paras-photoचिनजानपछि रुबेलले खाना खाइसकेका पत्नी र छोरालाई सुत्न पठाए । आफु पारससँगै बसेर ह्वीस्की पिउ“दै राजनीतिक गफमा मस्त बने । लाउडा विवाद, हेटौंडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, बोइङ ७५७ बेचेको कुरामा दुईबीच गफ हुँदा विवाद बढ्दै गयो । दुवैलाई रक्सीले छोइसकेको थियो ।
मात बढ्दै गएपछि मध्यरातमा बाघकोे शिकार गर्न जानेसम्मको कुरा चल्यो । रुबेलले शिकार खेल्ने कुरा अस्वीकार गर्दा पारसले जिद्दी गर्न थालेको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका तत्कालिन प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक थापासमक्ष दिएको बयानमा रुबेलले बताएका छन् । आफुले जान नमानेपछि पारसले निधारमा पेस्तोल ताकेको बयान उनले दिएका छन् ।
‘गोजीबाट पेस्तोल निकाली निधारमा गोली ताकी, गाली गलौज नराम्रँ शब्दहरु, ‘यु आर डेड, यु आर द वास्टर्ड, वी ह्याज फिनिष्ड होल मोनार्की, सिन्स यु ह्याभ अराइभ्ड दिस कन्ट्री’ भनेर सुट गर्न लागेका थिए’, रुबेलले बयानमा भनेका छन् । पारसले श्रीमती र छोरालाई समेत सिध्याइदिने धम्की दिएको बयान रुबेलले दिएका थिए । रक्सीले मातेका पारसलाई छलेर नजिकैको झाडीमा लुक्न गएपछि बन्दुक पड्केको आवाज आएको चौधरीको बयानमा उल्लेख छ ।
मुद्दा दर्ता र पारस पक्राउ
घटनाको स्थलगत मुचुल्का गरी इलाका प्रहरी कार्यालय दिव्यनगरका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी गंगाबहादुर क्षत्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २८ मंसिरमा जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्र्ता ग¥यो ।
टाइगर टप्स होटलबाट सिधै पोखरा गएका पूर्व युवराज पारसलाई कास्की प्रहरीले पोखराबाटै पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले उनलाई हेलिकोप्टरबाट चितवन ल्याइएर तीन दिनसम्म मध्य क्षेत्र प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरमा राखिएको थियो ।
« Reply #8 on: April 05, 2015, 10:43:34 PM »
Himani le pani chodera India Jane re.
« Reply #9 on: April 06, 2015, 04:47:25 PM »
पूर्वयुवराज पारस शाहले सोमबार राजधानीका चार शक्तिपिठहरूको दर्शन गरेका छन्।
चार दिनअघि स्वदेश फर्किएका पूर्व युवराज पारस शाहले आज बिहानै काठमाडौंका गुह्येश्वरी, पशुपतिनाथ, संकटा र तलेजु मन्दिरको दर्शन गर्दै आफ्नो ग्रहदशा नाश होस् र परिवारसँग सम्बन्ध राम्रो बनोस् भन्ने कामना गरेको बताइएको छ।
बिहान साढे ७ बजे कुण्डलिनी क्लबबाट निस्केका उनी सुरूमा गुह्येश्वरी त्यसपति पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए।
पशुपति दर्शनपछि हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानीको मन्दिर पुगेका उनले संकटा मन्दिरमा पुगेर पारसले आफ्नो ग्रहदशा कटोस् भनेर कामना गरेका थिए।
संकटाबाट पारस आफ्ना सहयोगीसँगै साढे १० बजे कुण्डलिनी क्लव फर्किएका छन्। उनका परिवारले निर्मल निवास आउन रोक लगाएपछि पारस हाल धुम्वाराहीस्थित कुण्डलिनी हेल्थ क्लवमा बस्दै आएका छन्।